‘गोपी’को सन्देशः ‘परिश्रम गर, हरेश नखाउ’ – Gandaki Media
शुक्रबारदेखि रिलिज हुन लागेको चलचित्र ‘गोपी’को विशेष शो दोश्रो पटक काठमाण्डौमा आयोजना गरिएको छ । काठमाण्डौको बीग मुभिजमा आयोजित विशेष शोमा कृषीमन्त्री चक्रपाणी खनाल, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा लगायत पुगेका थिए । पत्रकार र कर्पोरेटका लागि आयोजित विशेष शोमा उपस्थित अतिथीहरुले चलचित्रको बिषयवस्तुको प्रशंसा गरेका थिए ।
चलचित्रलाई दिपेन्द्र लामाले निर्देशन गरेका हुन् । चलचित्रमा विपिन कार्की, सुरक्षा पन्त र बर्षा राउत, अंकित खड्काको मुख्य भूमिका छ । सामिप्यराज तिमिल्सिनाको लेखनमा तयार भएको चलचित्रले परिश्रम गरे, असफलतामा हरेश नखाउ भन्ने कथालाई उठान गरेको छ ।
चलचित्रले स्नातकोत्तर अध्ययन गरेर गोल्ड मेडल जितेपनि नेपालमै बसेर गाइपालन गर्ने एक यूवकको कथालाई उठान गरेको छ । चलचित्र हेरेका अधिकांश व्यवसायीहरुले यसको कथावस्तु र उठान गरेको बिषयलाई रुचाएका छन् ।
चलचित्र ‘गोपी’मा विपिन गाइपालक कृषकको भूमिकामा देखिएका छन् भने उनलाई सुरक्षा र बर्षाले प्रेमिकाको रुपमा साथ दिएका छन् ।
कला /सस्कृति रोचक विचार/विविध
म किन धनी छु, किनकि मसँग स्तन र योनी छ !
Posted on September 26, 2018 Author By admin
म हरेक गल्लीमा असुरक्षित छु आमा त्यो सडक,घर, स्कुल, कलेज, चिया पसल सबै सबै ठाउँमा । तिमी सोच्छौ होला आमा सुनचाँदी, पैसा केही छैन छोरीसँग कसरी असुरक्षित हँ ? तर थाहा छ आमा तिमीलाई आजभोलि छोरीसँग लुटिन धन हैन नी स्तन र योनी हेरिन्छ । अनि आमा सानो हुँदा सकी नसकी छोप्ने गरेका मेरा संवेदनशील […]
कला /सस्कृति मनोरन्जन विचार/विविध समाज
पाँच महाकल्प पर्व– तिहार
Posted on November 5, 2018 Author By admin
नेपालीका लागि तिहार दशै पछिको सबैभन्दा ठुलो चाड मानिन्छ । दशै राजसिक एवं तामसिक प्रकृतिको पर्व मानिन्छ भने दीपावली एवं तिहार विशुध्द रुपमा सात्विक प्रकारको पर्व हो । यो पर्वलाइ प्रकाशको पर्व पनि मनाइन्छ र यो पर्व उत्सव मात्र नभई महाकल्प पनि मानिन्छ । यस पर्र्वमा घरको वातावरण सफा सुग्घर एवं मनमोहक हुन्छ र धन […]